လိုလို-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ပြောဆိုသုံးနှုန်းကြသော ဘားမစ်(Burmic) ဘာသာစကားများဟူ၍လည်းခေါ်တွင်သည့် လိုလို-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများသည် တိဗက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားအုပ်စုတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၂ ပါဝင်သည့် ဘာသာစကားများ
၃ အုပ်စုပြင်ပဘာသာစကားများနှင့် ဆက်နွယ်မှု
၄ အုပ်စုတွင်း အမျိုးအစားခွဲခြားမှု
၁၉၅၀ ခု ပတ်ဝန်းကျင်မတိုင်မီက လိုလိုလူမျိုးတို့ မိမိတို့ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ခေါ်တွင်သော လူမျိုးစုအမည် လိုလို ကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် နှိမ့်ချသည့်အနေဖြင့် ရေးသားခေါ်ဝေါ်သောအက္ခရာဖြင့် ရေးသားကြသည့်အတွက် ထိုအသုံးအနှုန်းကို တစ်ခါတစ်ရံရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်။ ၁၉၆၆ မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ရောဘတ်ရှာဖာ က လိုလို-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများကို "ဘားမစ်"ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် "မြန်-ယီ" ဟူ၍ သုံးနှုန်းပြီး ဗမာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် "မြန်" နှင့် တိုင်မျိုးနွယ်စုတို့ကိုခေါဝေါ်သော အသုံးအနှုန်းများစွာရှိသည့်အနက်မှ "ယီ" ကိုယူ၍ ပေါင်းစပ်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရမှ လိုလို ဟူသည့်အက္ခရာကို အခြားအသံတူသော နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်မှုမပါဝင်သည့်အက္ခရာဖြင့် အစားထိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် "ယီ" အစား "လိုလို" စကားလုံးဖြင့် ပြန်လည်တွဲစပ်ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့သည်။
ဤဘာသာစကားမိသားစုအတွင်းတွင် နာခီနွယ် (မိုဆို)ဘာသာစကားအုပ်စု၏ အနေအထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း လိုလိုနွယ် နှင့် ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများနှင့်အတူယှဉ်တွဲလျက် အုပ်စုကွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ လာမာ (၂၀၁၂) က နာခီနွယ်အုပ်စုသည် လိုလိုနွယ်ဘာသာစကားများအတွင်းမှ အုပ်စုကွဲတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး Guillaume Jacques ကမူ ၎င်းသည် ချီယန်နွယ်ဘာသာစကားအုပ်စုမှဖြစ်သည်ဟု အဆိုပြုခဲ့သည်။
ဗမာစကားမတိုင်မီက အထက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပြောဆိုခဲ့ကြသော ပျူဘာသာစကား သည်လည်း လိုလို-ဗမာနွယ်ဘာသာစကားမိသားစုအတွင်းမှဖြစ်သည်ဟု ရံဖန်ရံခါ သတ်မှတ်ကြသော်လည်း အသေးစိတ်ကျကျနန ခွဲခြားလေ့လာရန် အထောက်အထားများစွာမရှိသည့်အတွက် တရုတ်-တိဗက်နွယ်ဘာသာစကားမိသားစုတွင်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုပဲထားရှိသည်မှာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်လေသည်။
အခြားသော တရုတ်-တိဗက်နွယ် မိသားစုအတွင်းရှိ အမျိုးအစားခွဲခြားမသတ်မှတ်နိုင်သေးသော ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည့် မြိုဘာသာစကား မှာမူ လိုလို-ဗမာနွယ်မိသားစုနှင့် နီးကပ်ဆက်နွယ်နိုင်ပေသည်။
အေဒီ ၃ ရာစုနှစ်ခန့်က ပြောဆိုခဲ့ကြသော ဘာသာစကားတစ်ခုဟု အတည်ပြုထားပြီး တိဗက်-ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများတွင် အစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်တွေ့ရှိရသောဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည့် ပိုင်လမ်ဘာသာစကားသည် လိုလို-ဗမာနွယ်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး လိုလိုနွယ်အုပ်စုမှဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
Guillaume Jacques နှင့် Alexis Michaud (၂၀၁၁) တို့က နာခီ-ချီယန်နွယ်နှင့် လိုလို-ဗမာနွယ် ဟူသည့် အဓိကအုပ်စုနှစ်စုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဗမာ-ချီယန်နွယ်ဘာသာစကားအုပ်စုတစ်ခုရှိသည်ဟု အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ David Bradley (2008) ကလည်း လိုလို-ဗမာနွယ်နှင့် ချီယန်နွယ်အုပ်စုခွဲနှစ်ခုပါဝင်သော အရှေ့ပိုင်း တိဗက်-ဗမာ အုပ်စုခွဲတစ်ခုကို အဆိုပြုခဲ့လေသည်။
ဘရက်ဒလေ (၁၉၉၇) က လိုလို-ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများကို အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။
လာမာ (၂၀၁၂) ၏ ဘာသာစကား ၃၆ မျိုးတို့အား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မွန်ဇီနွယ်ဘာသာစကားအုပ်စုသည် လိုလို-ဗမာနွယ်အုပ်စုအောက်ရှိ အုပ်စုကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြိုနှင့် ဥဂွန် တို့ကိုမူ လိုလို-ဗမာနွယ်အုပ်စုအတွင်းသို့ လာမာက ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
[Does neither accept Loloish?]
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 21 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jacques, Guillaume, and Alexis Michaud. 2011.
↑ Bradley, David. 2008.
Bradley, David (2012). "The Characteristics of the Burmic Family of Tibeto-Burman". Language and Linguistics 13 (1): 171_192. Archived 21 November 2020 at the Wayback Machine.
Van Driem, George (2001). Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region. Brill.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိုလို-ဗမာနွယ်_ဘာသာစကားများ&oldid=741042" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။